September 19, 2010 by chowutyee
Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 22 Comments
Fattyကို ကျွေးပြီပြီလေ… 🙂
ဟုတ်တယ်.. ဖက်တီး စားတာများနေပြီ… ငါ့အမွှာလေးပဲ ကျွေးတော့မယ်… 😛
ကိုသားကြီးရေ အချိန်ကြာပေမယ့် စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် စမ်းလုပ်ကြည့်ပါအုန်းနော်… နေကောင်းပါတယ်.. ခုတစ်လော သိပ်မအားတာနဲ့ ဟင်းသစ်တွေ သိပ်မတင်ဖြစ်တာလောက် ပါပဲ… 🙂
hee Thanks Thida!! Plz try it, it is really good taste! 😉
Thanks for all your recipes,without your help we’ll be dead already.From china with 谢了您的作品 KKSS 😀
haaa… Thanks KKSS too! 😛
၀တ်ရည်ရဲ့ blog ကို ခဏခဏ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပျင်းလို့ comment မရေးဖြစ်တာ။ 😛
ဒီဝက်သားကင်လေးကို အရမ်းကြိုက်တာပဲ။ ၀တ်ရည် ရဲ့ နည်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် oven ကို ၂၀၀ ဒီဂရီဆိုတာ တော်တော် အပူချိန်နည်းတယ်။ အိမ်မှာ 350 to 400 လောက်နဲ့ ကင်မှ ရတယ်။ နို့မို့ဆို ကျက်မှာမဟုတ်ဖူး။ ဒါပေမယ့် ခုမှစဉ်းစားမိတယ်။ ၀တ်ရည်က Celsius unit နဲ့ပြောတာမဟုတ်လား? အဲဒါဆို ၂၀၀ က ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ 😉
နောက်ဆို အပူချိန်ရေးတဲ့အခါ unit လေးထည့်ရေးပေးရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ။ (ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်) 🙂
Five Spice powder ကို CityMart မှာလည်း ၀ယ်ယူလို့ ရပါတယ်.. 🙂
Plz try it.. Thanks 🙂